यस्तो बेलामा पनि नबोले मरे–बाँचेको के पत्तो ?
जेठा मामाको त भांग्राको धोती कान्छा मामाको कुन गति भनेजस्तै पार्टीको त यो हालत छ भने त्यही पार्टीको सरकाको हालत के होला ? मैले त फर्केर हेरेको पनि छैन । असफल हुनु त एउटा कुरा हो, तर मैले केही नवीनतम काम गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्ने हो । हामीजस्ताले त चारपाँच दिन लगातार फोन गर्ने प्रयास गर्दा कुनै मन्त्रीसँग कुरा हुन सक्दैन भने सामान्य कार्यकर्ता र जनताको पहुँचको त के कुरा गर्नु ? जुन देशमा राजा महेन्द्रजस्ता कराँतिला राजाका छोरा ज्ञानेन्द्रलाई त पाँच वर्ष सन्चोले बस्न दिएनन्, त्यो देशमा हामीजस्ता जनताका छोराछोरीले आफूलाई राजा बनेको स्वाङ गर्दा के होला ?